Ngathi | Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
Umsebenzi woMgangatho wezeMpilo
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: na umenzi phambili iimveliso ezisemgangathweni zonyango, yasekwa ngo-2015.
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: ngumvelisi ophambili weemveliso zonyango ezisemgangathweni, ezasekwa ngo-2015. Intsapho yethu yemveliso ibandakanya ukuphathwa komoya, ukuphefumla, ukuvuselela / ukungena umoya, ukuhanjiswa kweoksijini kunye neemveliso zonyango. Ifunyenwe kwindawo entle yaseWuxi Jiangsu e-China, i-Bornsun ibandakanya indawo yokugcina izinto kunye nendawo yokuhambisa, indawo yemveliso, igumbi lokucoca, kunye neeofisi zolawulo zabasebenzi abangaphezulu kwama-50. Siphuhlisa kwaye sivelise ezethu iimveliso, sinokuphendula ngokufanelekileyo kwiimfuno eziguqukayo zabathengi bethu, abathengisi, kunye nentengiso yezempilo. E-Bornunun, wonke umntu osebenzayo uzimisele kwaye ukulungele ukunceda apho afuneka khona kakhulu. Nesimo sengqondo esakhayo, sisebenza kunye ukuphendula ngokukhawuleza nangokukhawuleza kubathengi bethu, amaqabane ezoshishino kunye nabanye. Siyaqonda ukuba ukusebenzisana kubaluleke kakhulu ekukwazini ukujongana neemfuno zabathengi bethu kunye neemfuno zengcali yezempilo.
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: inxaxheba kuphando lwezixhobo zonyango, ukwenziwa kunye nentengiso. Iqela le-R & D elikhokelwa yi-MD kunye neenjineli eziphezulu zihambelana nokujolisa kwintengiso, isayensi kunye netekhnoloji njengesikhokelo, zihlala ziphuhlisa iimveliso zobuchwephesha. Ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zokuphefumla, i-anesthesiology kunye neeklinikhi ezingxamisekileyo.
Iimveliso zokuphefumlaI-oksijini mask, imaski ye-nebulizer, i-canal oksijini ye-oksijini, ityhubhu yokudibanisa, i-catheter yokufunxa, i-catheter evaliweyo, inkqubo yokulawula isitulo, ibhegi yoxinzelelo lwe-infusion, ibhegi yomchamo, i-liner yokufunxa, ityhubhu yesisu.
Sinezixhobo ezingama-5000 -ultra-Ukucoca / amagumbi angenazintsholongwane kunye ne-2000㎡ yokwakha iofisi kunye nendawo yokugcina izinto. Izinto ezisetyenzisiweyo kwimveliso kunye nokupakisha zikhethwe ngokukodwa ukubonelela ngemveliso ngomgangatho ofunekayo ukuze usebenze ngokukuko kuluhlu lwezicelo zeklinikhi ezifunwayo. I-Bornsun iyakwazi ukusebenzisa ezobuchwephesha obuphambili kumgca wemveliso, ukuqesha abantu abafundileyo nabaqeqeshiweyo ukuvelisa kunye nabaphicothi zincwadi abanobuchule kulawulo lomgangatho, kunye nokuseka imeko yemveliso eyoneleyo yokuvelisa, ukupakisha kunye nokubulala iintsholongwane. Sinexesha lokuhambisa ngokukhawuleza kwi-15-45days. Iimfuno ezizodwa zinokunikezelwa. Sinezatifikethi ze-CE kunye ne-ISO13485.
Iqela lethu lobunjineli lobuchwephesha liya kuhlala lilungele ukukusebenzela ukubonisana kunye nengxelo. Siyakwazi ukunikezela ngeesampuli zasimahla ngokupheleleyo ukuhlangabezana neemfuno zakho. Imizamo egqwesileyo iya kuveliswa ukukunika inkonzo efanelekileyo kunye neempahla. Nabani na ocinga malunga nenkampani yethu kunye nentengiso, nceda unxibelelane nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye unxibelelane nathi ngokukhawuleza. Njengendlela yokwazi ukuthengisa kwethu kunye nokuqina. okuninzi, unokuza kumzi-mveliso wethu ukuze ufumanise. Siya kuhlala samkela iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela kwishishini lethu ukwakha ubudlelwane beenkampani nathi.